Yini ukugqoka isikhumba isiketi: a imibono embalwa
Le ntombazane kufanele kuhle ibukeke njalo. Naphezu kwesimo sezulu, isimo noma indawo lapho uhlala khona. Ngakho-ke, bafowethu eziningi kuyoba iseluleko ewusizo ngalokho ukugqoka nge isiketi lesikhumba ukubukeka emuhle futhi nenhle.
Kufanele kuqashelwe ukuthi kungakhathaliseki ukuthi izikhathi eziningi noma washintsha, lesikhumba isiketi uhlale zamanje. It kungenziwa igqoke kokubili ehlobo izikhathi ezibandayo nyaka, yena muhle emsebenzini, emcimbini noma ngisho usuku romantic. Lena into ebalulekile ukuthi kufanele sibe ikhabethe zonke intombazane.
Yini ukugqoka nge isiketi lesikhumba ukusebenza? Ngokuyinhloko-ke Kuyaphawuleka ukuthi i-umsebenzi odinga eyolanda ipensela isiketi esimnyama umbala. Kuyobukeka enhle hhayi kuphela, kodwa futhi ngokulinganisela ezinzima. kufanelekile okunjalo ndawonye ihembe elula ethafeni, emhlophe kangcono noma beige, ngaphandle frills, ruffles neminsalo. Phezulu ungakwazi ukugqoka ijazi elimnyama. Zonke oda umsebenzi, okuyinto sizofakwa lesikhumba isiketi, kulungile!
Ngelanga intombazane kufanele ibukeke mnene futhi yothando. Ngakho-ke, umphetho lesikhumba (okuyinto ngenhlanhla kungaba eside noma esifushane, futhi yimuphi umbala) ingacosha ukukhanya iyashintsha iyaphupha ibe ihembe. Sekuvele kukhona afanele abe frills emnene. Futhi-ke, kubalulekile ukuba singakhohlwa izithende!
Zabesifazane lesikhumba iziketi zabo Kusengenzeka futhi phezu izinhlobo ezahlukene amaqembu. Yini kungenziwa igqoke nge isiketi usesimweni esinjalo? okukhipha Excellent kuyoba phezulu, isikibha noma isikibha nangebala, unga nge ukuphrinta onamileyo. Isithombe ngokuphelele umphelelisi ezinkulu round namacici, bamba nasemaqakaleni amabhuzu noma izicathulo ne umbala okungafani.
Wokuqonda sizogqokani nge isiketi lesikhumba, nenekazi kufanele uqaphele kakhulu, ngoba kulula kakhulu overload isithombe sakho futhi bheka nje inhlamba. Ngakho, kumelwe sikhumbule ukuthi isikhwama nezicathulo kusuka ukwaziswa okufanayo, kodwa begqoke ngokugcwele isikhumba kungenziwa kuhlangene isiketi lesikhumba - ifomu embi. Ngakho-ke kungcono ukuqeda le ngubo njengoba nebhantshi lesikhumba isiketi ukwaziswa okufanayo, kungaba nje abamele nemikhutshana kuleso ezithile.
Yini ukugqoka isikhumba isiketi, lwavutha kusukela phezulu kuya phansi? Indlela enhle kakhulu aphume isimo ngeke bagqoke ngesitayela yezwe. Uzodinga kuphela turtleneck futhi ivesti kungenziwa igqoke izinyawo izicathulo zakho. Amahle engavamile!
A imithetho embalwa
Uma isikhumba isiketi ngqo noma has ukuma "umsizi", engxenyeni engenhla ladies ikhabethe kungaba Fluffy. Ngakolunye uhlangothi, uma isiketi enwetshiwe phansi, kungcono ukugqoka phezulu ezikubambayo. Uma umbala lesikhumba isiketi wentombazane elikhanyayo, phezulu kungcono ukugqoka imibala egqamile noma okungafani. Kubukeka kunganambitheki lesikhumba isiketi nge amabhuzu, kanye izingubo, "isilwane" yezicathulo. Dlala lesikhumba isiketi - umgoqo for girls imilenze ongaphakeme egcwele. Futhi, ningawenzi ukugqoka izintokazi lesikhumba ipensela isiketi abanale nkinga izindawo figure, isibonelo, okhalweni olubanzi. Ukuze kwansuku ukugqoka ephelele omnyama noma amnyama lesikhumba isiketi, ke kungenziwa kuhlangene iyiphi phezulu futhi akubukeki engahlanzekile noma uluhlaza. Kubalulekile futhi ukuba ukhethe izesekeli ilungelo ezisesithombeni ephelele hhayi ngokweqile.
Fishnet obumbene izinsana: amathiphu
Izitolo zokugqoka: izinzuzo zokuthenga
Ukukhetha Pump wamabele
Izimonyo MejTan - umthengi Izibuyekezo
Ukujwayeleka - lena okubi noma okuhle? Meaning, omqondofana nezibonelo